Telephone ku hadalka badan iyo caafimaadka? | Saxil News Network
Waa su’aalo muhiim ah oo ka dhalanayso cabsida laga qabo isticmaalka joogtada ee moobeelada, haddii ay caafimaadka dhibaato u keeni karaan iyo dhibaatooyinkaas nooca ay noqon karaan.
Way jiraan qoraallo badan oo laga diyaariyay arintaan iyadoo lagu diraasaynayo xiriirka ka dhaxeeyo kansarka, xanuuno kale hadii ay jiraan iyo saameenta dhambaalada bir-qabadka leh ee taleefanda.
Waxay baaritaanada xooga ay wada saareen xanuunka kansarka maadaam taleefanka uu bixinayo signals joogto oo laga cabsaday amay saameyn ku yeelan karaan qaabka jirkeena u shaqeeyo.
Inkastoo signals’ ka soo baxo taleefanada wireless-ka ku shaqeeyo la qiyaasayo in ay dhici karto in ay keenaan laba nooc oo kansar maskaxda galo oo la kala dhaho “Glioma iyo Acoustic Neuroma” laakiin illaa iyo hadda wax cilmibaaris lagu ogaaday ama hubaal loo hayo in moobeelada kansar laga qaado lama hayo, waana go’aanka ay hay’dda caafimaadka aduunka “WHO” ay ka gaartay gunaanadka baaritaanadaas oo idil.
Waxaa kaloo la baaray in mobeelada uu saameyn ku leeyahay shaqada wadnaha, hooyada uurka leh, dhinaca raganimada, hurdada iyo isbadalka niyada iyo fakarka qofka, iyadane baaritaano arintaas wax ku ool ah oo wax lagu dhisi karo lama hayo inkastoo ay socdaan baaritaano dhowr ah oo laga war sugayo wixii ka soo bixi doono arintaas.
Waxa kaliya oo la arkay oo dhibaato keeni karaan moobeelada waa in ay saameeyaan shaqada qalabyada kale ee ku shaqeeyo signals-ka sida qalabka wadnaha la galiyo, qalabka maqalka loo adeegsado ee maqalka iyo wixii la mid ah.
Waxaa kaloo la isku waafaqay in heerka shilalka gawaarida ay bateen markii aad u faafeen isticmaalka moobeelada sidaasne uu xiriir la leeyahay in 3 illaa 4 jeer ay shilalkii labalaabmeen.
Inkastoo moobeelada in kansar maskaxda laga qaado aanan weli la xaqiijin, laakiin waxaa laga cabsi qabaa in isticmaalka joogtada ah oo sanooyinka badan in ay dhici karto inuu dhibaato keeno maadaama hadda aanan laga joogin waqti badan xilligii la bilaabay isticmaalka moobeelada siyaadada ah, laakiin cabsida hadda jirta ayaa ah in da’ aad u hooseyso lagu bilaabo isticmaalka moobeelada waqtigaan la joogo oo waalidka caruurtiisa u soo iibiyo mobeel ama taleefan markii ay gaaraan da’ 10 sano iyo wixii ka sareeya taasina ay keeni karto in sanooyin aad u badan uu qofkaas ku xirnaan doono isticmaalka moobeelkaas iyo in howlihii loo isticmaali jiray moobeelka oo aad u badatay oo aysan ahayn kaliya wicitaanka oo hadda wax kasta loo adeegsado.
Talow jiilkaan cusub dhibaato aan horay loo arag ma lagu arki doonaa markii 20 ama 30 sano ka soo wareegato?!!
Waa su’aal aan hadda laga jawaabi karin, waana cabsi taagan.